Kusho ukuthini uma uphupha ngomuntu oyithandayo?
Amaphupho amaningi esiwabona ebusuku, ahlaziywa ngendlela ekhethekile futhi abe nencazelo eyimfihlakalo. Kodwa kungani siphupha, ngani? Basitshela okuthile esingenakuzibona thina ngenxa yezizathu ezithile ezikhethekile. Amaphupho akuyona nje ibhayisikobho yohlu ebusuku, ulimi oluyimfihlo oluzokwazi ukuxhumana nathi.
Ngakho-ke luhlobo luni lwazi loluphupho olufuna ukusidlulisela kithi, lapho siphupha abantu bethu abathandekayo? Kungani siphupha njalo ngendoda esithandayo?
Ingabe uthanda umfana noma indoda ejwayele isikhathi eside, obengenakuxoxa naye ngemizwa yakho? Kodwa awukwazi ukuthi ukusabela kwakhe kuyoba njani? Mhlawumbe uzoqala ukuhlangana futhi ekugcineni uphile ngokujabulisayo emva kwalokho, futhi mhlawumbe, ngokuphambene nalokho, uzovele ehlekise wena futhi akukho lutho oluzovela kulo. Kumelwe wazi ngokuqinisekile ukuthi imizwa yakho iyabelana noma cha.
Mayelana nokuthi kusho ukuthini, uma umuntu ebopha ephusheni, funda lapha
Uma uphupha ukuthi umuntu oyifunayo noma umfana othanda ukukunika i-bouquet enkulu futhi enhle yama-roses amhlophe, khona-ke empilweni yangempela uzohlangana naye futhi lo mhlangano uzofana nomhlangano nawo wonke ama-shades of romanticism, ukunakekelwa nokufudumala. Ngisho noma ungathandi izimbali ezinikezwe zona, ngeke usakwazi ukuthonya incazelo yokulala.
Kungani uphupha uma umfana oyithandayo ethatha isandla sakho noma nje ekuthinta? Kumele ngithi akuyona nje iphupho, mhlawumbe uzoba umbhangqwana, futhi uzoba sesimweni sentombazane yakhe ethandekayo. Kodwa ungaqhubeki izinto - nje ulinde kuze kufika isikhathi sakho, gcina izenzakalo ezenzeka manje.
Uma uphupha ukuthi umfana okhanukisayo uyamomotheka ngokukhululekile futhi ngobuqotho kuwe, khona-ke empilweni yangempela ufuna ukukugcwalisa ngokuncoma futhi athi amagama amaningi amahle futhi anomusa. Kungenzeka ukuthi unamahloni kakhulu, lokhu kungokwakhe futhi ubambelela emuva, kodwa kufanele ukhuthazele. Isikhathi siyodlula futhi angaba nesibindi, ngakho konke kuzokwenzeka.
Uma uphupha ukuthi uphikisana naye, khona-ke empilweni yangempela udinga ukumphatha ngokucophelela, ukuze ungabangeli noma yiziphi izimo zokungqubuzana nokugaya izinhlangothi zombili. Uma ukhulumisana naye, khona-ke kunoma yisiphi isimo esicindezelayo zama ukuhleka noma ukuxazulula yonke into ngokunciphisa. Uma kukhona isimo esiyinkinga, sebenzisa isikhali esibaluleke kakhulu - ukumomotheka.
Uma uphupha into yokudumisa, kodwa ephusheni akukuzi, khona-ke kuyoba ngcono uma empilweni yangempela ungahlangani, nje ukhohlwe. Kungenzeka ukuthi usenayo intombi, ngakho-ke ungabi namathemba. Ngeke uhambe naye ngesandla, futhi kufanelekile ukuvumelanisa nayo. Ungabulawa ngalokhu, awusiye wedwa, amantombazane amaningi ahlukunyezwa ngothando. Funda ukuvumela abantu ukuba bahambe kanye nengxenye ngemicabango emihle nezinkumbulo. Ngakho-ke, ungashiya izinkumbulo ezinhle kuphela ezinhle, akekho owaziyo, kodwa ngokuzumayo le mizwelo izokwazi ukunciphisa futhi futhi manje kufanele ufunde ukuhlala ngaphandle kwayo.
Uma umfana ephusheni ukumema ukuthi uhambe noma uhambe naye kumabhayisikobho, i-cafe noma kwenye indawo, empeleni uyakuthanda njengoba nje akwenza kuwe. Ngakho-ke, awusiye kuphela ofuna ukwazi iqiniso.
Mayelana nokuthi kusho ukuthini, uma umuntu ofanayo ephupha, funda lapha
Uma uzwa ebuthongweni bakho ukuthi ubiza kanjani ngegama, awukwazi ngisho nokukhathazeka ngokuthi uyakuthanda. Kulesi simo, ungaqinisekisa ukuthi angeke abe njalo, kepha ngokuvamile uvame ukukukhumbula. Kungenzeka ukuthi uyamangala ngawe. Noma kunjalo, ungaphuli induku. Ngisho noma ukwazi ukuthola ukuthi uyakuthanda, ugcinwe, njengemvelo kunanini ngaphambili, lokhu kuzomvumela ukuba anqume futhi aqonde ukuthi umuntu kufanele avume kangakanani ukuzwa imizwa yakhe.
Uma ephusheni lakho wenza i-aphoyintimenti, uya endaweni oya kuyo, kodwa ayikho, ngakho-ke kunenkinga enjalo, ebizwa ngokuthi i-womanizer. Ekukhetheni kwakho amanye amantombazane futhi ngenxa yanoma yiziphi izizathu azikwazi ukuchazwa. Ngakho-ke, umsebenzi wakho ukuzibonakalisa ohlangothini olungcono kakhulu, zama ukungahawukeli futhi ungasheshi ukugqama, khumbula ukuthi awukho muntu kuye, awunayo ubuhlobo.
Uma uphupha ukuthi indaba yokububula ikuhlambalaza futhi inesihluku futhi iziphatha ngendlela engafanele, kusho ukuthi awuyena umbhangqwana. Wena nje awuhambisani ndawonye. Ungazihlukumezi wena noma imizwa yakho. Khumbula, futhi ngokushesha, kungcono. I-Destiny ikulungisele okuthile okungcono kunaye.
Uma ephusheni lakho umfana othanda ukumtshela okuthile, kodwa angaboni emehlweni akho, khona-ke uqamba amanga kuwe, ucabange ukuthi kufanele athembeke. Yiqiniso, kufanele ukhethe kuphela, kodwa khumbula ukuthi maduzane uzoqala ukukhalisa izinyembezi, uma ubonisa ukuthi akuyona into emnandi kakhulu kuwe. Ukhohlwe njengephupho elimbi futhi uhambe. Ngisho noma kunzima kakhulu ukuhlukana nalezi zinkinga, akudingeki ukuba uzibophezele. Khumbula ukuthi umkhohlisi uyobe ekhohliswa ngokwakhe.
Umfana ngokwakhe uvuma kuwe ngemizwa yakhe? Khona-ke ulindele ukuthi wena ngokwakho uvume kuye ngokuzwelana kwabo empilweni yangempela. Uma ufuna, ungahlakulela uhlelo oluphelele futhi usebenze. Kungani? Ngeke ulahlekelwe umqhele. Mhlawumbe ukuhlupheka kwakho kuzoyeka futhi kuzokusondeza.
Nokho, khumbula into eyodwa - wonke umuntu angenza amaphutha, ngakho ungathembeli amaphupho akho 100%. Njengomthetho, sifuna okuthile kakhulu futhi ekugcineni sicabanga ukuthi kunjalo. Mhlawumbe engqondweni yakho engacabangi, amaphupho akuyona into ekhona ngempela, kodwa kuphela izifiso zakho namaphupho akho. Ngokuvamile siphupha ngalokho esikufunayo ukubona. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi udweba lokho okubonayo emaphupheni nokuthi yini ofuna ukuyibona kuwo. Isibonelo, uma ephupheni uphupha insizwa oyithandayo ngempela, ngokumomotheka uyamomotheka futhi unike izimbali, kodwa empilweni yangempela awuboni noma uxoxisana nawe uthanda udoti, lapho ungacabangela khona imizwa? Akukho ndawo! Ngoba azikho, futhi uphuphe kuphela ngalokho ophuphayo. Ubuhlobo obunjalo abukho ikusasa.
Akudingeki ukuba udlulele futhi uthukuthele uma empeleni konke akuhambisani kahle ngendlela oyifunayo. Yiba nesineke futhi ulinde. Konke ngesikhathi esifanele. Futhi noma kunjalo, uphuthuma kuphi? Jabulela, funda noma wakhe umsebenzi. Into kuphela oyidingayo ukuba uqaphele futhi uqaphele, mhlawumbe indoda yokuphila yakho iye yahlala isikhathi eside, bheka nxazonke, mhlawumbe ungamboni.
Ukuchazwa kwamaphupho: umkhumbi ubheke ngani
Babambe isikhwama: laba bahumushi bayachaza kanjani lokhu?
Ukuchazwa kwamaphupho: Inkukhu iphupha ngani
Imoto yayiyiphupho - kungaba yini?
I-Horoscope ngo-Agasti 2017 kusuka kuVasilisa Volodina: Indlela yokusebenza enyangeni enzima yehlobo
Okuyisisekelo, okushoyo nokufanekisa ubuhle
Ingulube enomuncu i-steak
Isobho se-Broccoli ne-croutons
Indlela yokubeka umuntu ukuba alale?
Yiziphi izingubo ezifanele ukugibela